Ndiani ari Twittering Iwe? | Martech Zone
Mugovera, Gunyana 20, 2008 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Pane yangu yekudya mangwanani ano, yakakwira a pambiru izvo zvakandibata, Maitiro ekumisikidza Twitter yekuteerera posvo. Pane imwe nguva ini pandakadzvanya kuenda kune iyo posvo, zvakadaro, ini ndakaodzwa mwoyo nekuti pakanga pasina chaicho ruzivo rwekumisikidza chaiyo muteereri. Pane kudaro, ini ndaingosanganisirwa nepositi maitiro ekumisikidza iyo Twitter nhoroondo.
Kugadzira account yeTwitter hakukupe iwe chero nzwisiso mune izvo vanhu vari chaizvo achiti pamusoro pako, zita rako, zvigadzirwa kana kambani. Izvo zvinongopa chete nzira yekuti vanhu vataure newe kuburikidza ichi yakasarudzika svikiro.
Maitiro Ekumisikidza Micro-Blog Vateereri
Kuti ugadzire 'muteereri', unogona kungoenda kuGoogle uye utsvage izwi rauri kutsvaga (izvi Twitter muenzaniso inoratidza kutsvaga kwe "microsoft ad" kune twitter):
Kana iwe uchida kutora nhanho kuenda kumberi uye kunyatso kuita kune vanhu vanotaura pamusoro pako, chako chigadzirwa, kana rako maraki, gadzira a Google Alerts kukutumira email paunenge uchiitika. Saiye wekushambadzira kana mukurumbira maneja, ini ndinogona kutomisikidza yambiro yekuzivisa neGoogle Alerts uye ini ndaizopindura ndakananga kune iyo tweet.
Ko kambani yako inobhadhara marii?
Sep 20, 2008 na9:39 PM
Zvakanaka durh! Ungafunga kuti zvaizova pachena kuvanhu vakawanda. Zvinonzwika sekuti "havanzwisise" twitter vanozviita here?
Sep 21, 2008 pa 10: 01 AM
Wataura chokwadi, Jason. Pandakaona chinyorwa pane imwe saiti nezve kumisikidza 'twitter muteereri' asi pakanga pasina nzira yekunyatso 'teerera', ndaifanira kunyora iyo post!
Sep 21, 2008 pa 8: 37 AM
Ndaigara ndichinetseka kuti makambani andinotaura pa Twitter anokwanisa sei kundiwana uye kupindura. Zvino ndoziva. Ndatenda.
Sep 22, 2008 na2:46 PM
Mhoro, Douglas .. ndatenda nekubatanidza!
Huzhinji hwezano raBeth pakuteerera hurimo mushow yemasiraidhi. Muchikamu chekutanga cheposvo, anokufambisa kuburikidza nemagadzirirwo eakaunti, asi mune slideshow anoenda mune iwo ruzivo rwekuteerera mabhureki, maitiro uye zvimwe zvinhu zvaungave uchifarira kubva pamusika yekutsvaga nzvimbo. yemaonero.
Iye zvechokwadi anosanganisa kuteerera nekutaura, asi kune mamwe akanaka "maitirwo ekuteerera" matipi mumasiraidhi.
Sep 22, 2008 na3:48 PM
Ndatenda zvikuru nekundizivisa izvi! Ndine chikwereti kwamuri mese kukumbira ruregerero, ndakafunga kuti ndakanga ndachinja. 🙂 Zvinoita sekunge ndinoda kudzoka uye kuteerera!
Sep 24, 2008 na2:21 PM
🙂 Hapana kunetseka! Ndakashamisikawo pandakatanga kuiverenga - asi ndakazochera mupowerpoint. Zvimwe zvinhu zvakanaka. Beth muevhangeri ane hungwaru ane hungwaru !!
Sep 28, 2008 na1:51 PM
Imwe nzira iri nyore ndeye kushandisa TweetBeep.com iyo pachayo inoshandisa yaimbova Summize pa http://search.twitter.com. Ini ndinoshandisa TweetBeep kutarisa akawanda akasiyana mazwi anosanganisira ese akasiyana mispellings yezita rangu rekupedzisira! 🙂
Zvakare kune avo vanofarira ndakagadzirira siraidhi ye Nhanganyaya ku Twitter kuti ndakaendesa pa Atlanta Web Entrepreneurs 'yazvino Twitter kusangana.
Sep 29, 2008 pa 9: 17 AM
Mike, ndiko kuwana kukuru! Zvakatoipa kuti Tweetbeep yanga isina imwe mhando yekukurumidza ficha yekutora iwo mazwi ekutsvaga. Kana awa ikafamba kuti mumwe munhu achitaura nezvekambani yako - zvinogona kunge zvanyanya kunonoka!
Ndakaiwedzera kune zvemazuva ese zvinongedzo, zvakadaro! Ndatenda nekubata!
Blog Bloke - Kukubatsira iwe kuve Better Blogger
Zvita 10, 2008 na6:06 PM
Ini ndinosarudza kunyorera kune Twitter yekutsvaga mhinduro newsfeed (yepamusoro-kurudyi kona) sekudaro:
Nenzira iyoyo handisi kumirira kutenderedza email kubva kuGoogle chenjedzo. Ndinokwanisa kuwana ruzivo chero nguva yandakasarudza.
Zvita 10, 2008 na7:11 PM
Nguva yako yakanaka, Bloke! Ndizvo zvaiva zvangu post nhasi!
Zvita 10, 2008 na9:24 PM
Kugara muroora ..haambove muroora 😉